Wararka Maanta: Isniin, Jan 9 , 2018-Cabdi Warsame iyo Madaxda Dhiggiisa ah oo Munaasabada Caleema Saarkooda Lagu Qabtay Minneapolis, Madaxa Maaliyada MPLS na Noqday
Talaado, Janaayo, 09, 2018 (HOL) –Maalintii shalay oo ku aadanayad Isniin Janaayo 08, 2018, ayaa lagu qabtay xarunta laga xukumo magaalada Minneapolis xaflada munaasabadda dhaarinta iyo caleema saarka madaxda magaaladan hogaamin doonta affarta sano ee inagu soo aadan, kuwaas oo la doortay bishii bilawgii bishii November ee sanadkii ina dhaafay. Xafladdaan ayaa ahayd mid xiisa badan kana duwanayd xafladahii hore.
Magaalada Minneapolis waxa ay ka koobantahay 13 degmo, Isniintii shalayna waxaa si wadar ah loo dhaariayay duqa magaalada Minneapolis loo doortay ee Jakab Frey iyo sidoo kale sedex iyo toban ka gudoomiye kuwaas oo laga soo doortay 13-ka degmo ee magaaladu ay ka koobantahay. Golahaan waxaa ka mid noqday sanadkaan saddex shakhsi oo ka soo jeeda qawmiyada dadka madaw, meesha kalkii hore Abdi Warsame kaliya uu kaga jiray muwaadiniinta madow.
Abdi Warsame oo markii labaad dib loogu soo doortay guddoomiyaha degmada 6-xaad afar sano oo hor leh, ayaa HOL u sheegay in doorashadaan uu ku soo baxay ay ahayd doorasho aad u adeg, oo ay ka soo hor jeesteen 6 xildhibaan oo magac dheer iyo miisaan culus ku leh gobolkaan Minnesota. Xildhibaanadan oo ku maray wacad in Abdi marnaba aanu dib u soo bixin, ayaa dadaalkoodii uusan u shaqayn sidii ay rabeen. “Doorashadan waxa ay ahayd doorasho adeg, waxa ay na ku soo toostay xilli dabaylo siyaasadeed ay ka jiraan dalka guud ahaan”, ayuu yiri Abdi. Isaga oo ku sii nuuxnuuxsaday ayaa waxa uu ku daray, “waxa ay ahayd xilli dadka soo galootiga ah lagu hayo ilo gaar ah”.
Xafladan waxaa ka soo qayb galay madax iyo shacab badan kuwaas oo ay ka muuqatay taageero, farxad, raali ahaansho iyo qanaaco ay ku qabaan madaxdan cusub oo ay iyagu soo doorteen. Jacob Frey waa shakhsi dhalin yaro ah kaa soo loo doortay duqa magaalada Minneapolis, isla markaana shalay lagu dhaariyay isla madasha ayaa madasha ka akhriyay khudbad taariikhi ah aadna u qiiro badan.
Kadib goortii ay dhammaatay munaasabddii dhaarinta, ayaa mas’uuliyiinta la doortay ay guda galeen magacaabidda manaasib gaar ah, sida madaxweynha guddiga guddoomiyaasha degmooyinka magaalada, ku xigeenkeeda iyo miisaaniyadda, isla markaana, Abdi Warsame ayaa noqday madaxa miisaaniyadda iyo dhaqaalaha magaalada Minneapolis middaas oo ka dhigaysa masuulka ugu awoodda badan dhinaca dhaqaalaha gobolka Minnesota guud ahaan maadaama ay ay Minneapolis Mn ugu dhaqaalo badan tahay.
Afar sano ka hor ayay ahayd goortii loo doortay xilkan Abdi Warsame. Isla jagadii ayaana mar kale dib loogu soo doortay. Waxaana laga sugayaa in balanqaadyadii uu sameeyay goortii uu ku jiray tartanka doorashada uu fuliyo.
Ugu danbayntii, waxaa uu doono ha aaminsanaado madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump, ee tirade dadka madaw iyo muslimiinta ka soo dhalaalaya jagooyinka iyo kuraasta hogaanka dalkan ayaa soo kordhaya marba marka ka danbaysa. Abdi Warsame ayaana noqanaya tusaale iyo farriin farxad galinaysa mustaqbalak dhalinyarada Soomaaliyeed ee iminka aadda wax barashada.
Siyad Said Salah&Mohamud Dulyadey